उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २७ पुस २०७५)
कम्पनीले ५ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट पुस २० गते स्वीकृति पाएको छ । कम्पनीले ५ बराबर १ अनुपातमा रू. सय अंकित दरको १ लाख १० हजार कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्नेछ । साथै, कम्पनीले ४० दशमलव ५ प्रतिशत बोनस शेयर र २ दशमलव १३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
कम्पनीको कात्तिक २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले उक्त लाभांश पाउनेछन् । बिहीवार कम्पनीको शेयरमूल्य ३६ अंक बढेर रू. १ हजार ८ सय ६० पुगेको छ । कम्पनीको ८ महीनाको कारोबार अवधिमा शेयरमूल्य उच्चतम रू. २ हजार २ सय ५० र न्यूनतम रू. ५ सय ६ छ ।
2019-01-11 - 171 view(s) - abhiyan